Hunhu & EHS - Wuxi Anofara Chemical Technology Co, Ltd.
Hunhu & EHS
BASA & NOKUDZIDZA
Kuenzana uye kugona
Inofara makemikari yakazvipira kuve sosi inosarudzwa mukupa zvigadzirwa nemasevhisi emhando yepamusoro uye kukosha kukuru kune vatengi. Kuti tigone kuona kwedu kwakarongeka, isu tinofanirwa kusangana kana kupfuudza zvinodiwa nevatengi. Kutaura zvazviri, takavaka bhizinesi redu uye mukurumbira - pa "Wuxi inofara kutendeseka", chinova chikamu chakakosha chebasa redu ratinopa. Wese mushandi kuWuxirejoys anozvipira kubasa risingabhadharwe, kuteedzera maitiro, uye kuendesa zvigadzirwa uye masevhisi akanakisa.
EHS Management Sisitimu
HSE system ndiko kubatanidzwa kweEnharaunda Management System (EMS) uye Occupational Kuchengetedza uye Hutano Management System (OHSMS). Anofara makemikari ari kusimbisa matambudziko eEHS mukugadzira kwese kwese. Tiri kugadzira yakakosha ekudzivirira kwezvakatipoteredza, kugadzirwa kwakachengeteka uye bhizinesi rehutano hwevashandi. Mukuomerera kuunza EHS kune yedu yakareba-refu hupfumi kusimudzira. , isu tinoramba tichidzora nharaunda zvine njodzi, tichidzivirira kusvibiswa kwezvakatipoteredza zvinoenderana nemutemo mamiriro uye yakakosha mamiriro ezvemamiriro ekunze, kuitira kusimudzira kuchengetedzeka pabasa uye manejimendi ehutano, izvo zvinokurudzira budiriro yehurongwa hwehupfumi, nzanga uye EHS.
Tinotora basa redu munzvimbo yekuchengetedza, hutano uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kune vashandi vedu, nzanga yevanhu uye nharaunda, uye isu ticharamba tichivandudza nekuvandudza mashandiro edu. Kuchengetedzeka uye hutano hwevashandi vedu, kugara zvakanaka kwevatinobata pamwe nekuderedzwa kwesimba redu pane zvakasikwa nharaunda zvinoramba zviri pamberi peBoka.